सिंहदरबारभित्र सयौं गाडी अलपत्र : जनताको अर्बौ कर सहि सदुपयोग भएन…सेयर गरि सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउनुहोस ! – yuwa Awaj
सिंहदरबारभित्र सयौं गाडी अलपत्र : जनताको अर्बौ कर सहि सदुपयोग भएन…सेयर गरि सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउनुहोस !
मंग्सिर २, २०७७ मंगलबार 6
काठमाडौ : सरकारी कामकाजका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर भइरहेका सवारी साधनको उचित मर्मत सम्भार नहुँदा राज्यको सम्पत्ति कु’हिएर गइरहेको छ ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र पार्किङस्थलमा अबलपत्र छाडिएको यो गाडीमा घाँस उम्रेको छ । एकातिर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्ने अर्कोतिर संरक्षण अभावमा कवाडी बनेका गाडीलाई यसरी अल’पत्र छाड्दा सिंहदरबारको सौन्दर्यमा दाग लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारभित्र रहेका बिग्रिएर थन्किएका १५१ गाडी सञ्चालन लागि विभिन्न ठाउँमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले वर्षौंदेखि थन्किएका गाडीलाई मर्मत गरी चलाउनका लागि प्रदेश तह, स्थानीय तह र प्राविधिक शिक्षालयलाई दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनले ती निकायले आफैँ मर्मत गरी सञ्चालन गर्नका लागि दिइएको बताए । वर्षौंदेखि बिग्रिएर थन्किएका गाडी त्यतिकै रहेका थिए
उनले भने, “ती गाडीको सदुपयोग गर्नका लागि हामीले सङ्कलन गरेर पठाएका हौँ ।” कार्यालय गृहमन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा ती गाडी प्रदेश, स्थानीय तह र प्राविधिक शिक्षालयमा दिइएको हो ।
गाडीको अभाव भइरहेको बेला बिग्रिएर थन्किएका गाडीले प्रदेश तह र स्थानीय तहमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । यस्तै विद्यार्थीलाई सीप सिक्नका लागि शिक्षालयमा समेत ती गाडी पठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेका ती गाडी सङ्कलन गरेको हो ।
यसतर्फ कसले सोच्ने ? को जवाफदेही हुने ? हामी कहिले जिम्मेवार बन्ने ? यी तस्वीरले यातव प्रश्न जन्माएको छ ।रैबार
Prevसेवाबाट अवकाश लिने तयारी गरेका टिचिङ अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा.सुनील झाको कोरोनाका कारण नि’धन !
Nextहार्दिक बधाई ! रमेश प्रसाईंको स्वरको नयाँ गीतले कमायो १० लाख भ्युज…हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित)
खनालको नेतृत्वमा देश होइन, गाउँ पनि बन्दैन (सहि की गलत)
पुलको उद्घा’टन गर्न तनहुँ पुगेका वरिष्ठ नेता पौडेल प्र’हरीको निय’न्त्रणमा ! कारण छ यस्तो भिडियो सहित हेर्नुहोस् ।